EMBA spol. s ro bụ ụlọ ọrụ Czechoslovakia na ókèala dị n'etiti Oké Osimiri Ukwu na ugwu Jizera. Mmalite nke akụkọ ntolite kaadiboodu na Paseky nad Jizerou ejikọtara ya na afọ nke 1882, mgbe ụmụnna Rössler guzobere ebe a dị ka ụlọ ọrụ maka mmepụta nke ejiji ejiji ejiji maka akwụkwọ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ iko na Jablonec. Mgbasawanye nke mmepụta mmepụta na mmepụta ihe bụ njirimara maka oge ndụ nke ụlọ ọrụ.
Ihe ịrịba ama dị ịrịba ama n'akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa pastry bụ karịsịa ịbịpụta ígwè ọrụ cardboard akpọrọ na 1970 na 1989 afọ, nke rụpụtara nnukwu mmụba na mmepụta arụmọrụ. Na nineties nke narị afọ nke iri abụọ, n'okpuru akara EMBA, mmepụta ihe nchekwa akwụkwọ archival maka nchekwa zuru ezu nke akwụkwọ azụmahịa na akwụkwọ nke ọdịbendị na omenala malitere. Na narị afọ iri ọhụrụ, a na-akwado mmepụta nke mmepụta ihe site na ntinye maka ịmepụta ebe nchekwa ụlọ ọrụ.
Anyị maara banyere ihe nketa nke ọgbọ ndị gara aga, nke dugara anyị n'oge a na ntinye anyị iji mee nke ọma ịzụlite ọrụ bidoro. Dịka akụkụ nke mgbalị niile anyị na-eme iji bụrụ otu nzọụkwụ n'ihu ndị na-asọmpi anyị, anyị na-elekwasị anya na mma ngwaahịa na mmekọrịta ndị ahịa.
Ọkachamara anyị na ndị ọrụ anyị ruru eru bụ nkwa dị ogologo nke ọrụ kachasị elu. Anyị abụghị nanị na-ere ngwaahịa, ma anyị na-enye ndị ahịa ihe ngwọta zuru oke karịa mba 30 gburugburu ụwa.
EMBA bụ ụlọ ọrụ Czechoslovakia nke nwere ọdịnala dị ogologo na ụzọ dị mkpa maka ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi. A na-emepụta ngwaahịa ya site na nhazi akwụkwọ ma na-emegharị ihe niile. Site na ngwaahịa EMBA, o na-enyekwa aka na nchebe na ichebe omenala na akụkọ ihe mere eme n'ọtụtụ mba. Dị ka onye ọrụ mpaghara mpaghara, ọ na-ahụ maka ịzụlite ọrụ njikwa na nchekwa ọnọdụ nke ndị ọrụ ya, tinyere ntinye aka iji kwado nkwụsi ike nke obodo ahụ n'ozuzu ya.
Paseky nad Jizerou bụ ugwu ugwu dị na Semily, nke dị na Liberec, nke dị n'Ọdịda Anyanwụ Giant, n'ókè nke ugwu Jizera, n'akụkụ aka nri nke Jizera Mine. Ndị bi na 252 bi ebe a; ọtụtụ ụlọ na ụlọ ndị ọzọ na-eje ozi taa maka ezumike ezumike. Ógbè dị n'ebe ugwu nke obodo ahụ bụ Krkonoše National Park, nke dị n'ebe ndịda, tinyere ebe ndị dịpụrụ adịpụ n'Ugwu Ezigbo Nchedo nke Jizera.
Ebe mbụ e dere aha obodo a sitere na 1713.
O nwere ike ịbụ obodo a na 16. Otú ọ dị, ihe ndekọ mbụ sitere na 1654. Ebe kachasị nke mbụ bụ Makov, ebe iko ahụ dị n'oge ahụ, na Havírna, ebe e ji ọlaọcha mee ihe. Ka oge na-aga, oké ọhịa na-alaghachi na-arụ ọrụ ụmụ mmadụ, ụlọ chalets ndị ọhụrụ pụtakwara na nrọ ọhụrụ, ndị bi na ya, n'ezie, ndị na-akwa ákwà. Nkume ndị sitere na ebe ndị a na-egbutu osisi na-etinye uche n'osisi taa.
Ọganihu kasịnụ bụ Paseky na 1869, mgbe e debanyere 212 ebe a na ọnụ ọgụgụ na ndị 1710 bi. Mgbe ahụ, ndozi ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-alaghachi. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ebe ndị Pasek dị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Czechoslovakia, Njikọ Munich jikọtara na Germany dị ka akụkụ nke Southetenland. Ọbụna mgbe ndị bi na Pasek adịghị emetụ ndị Germany agha mgbe agha lụsịrị agha, e nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ na-adịgide adịgide, ọtụtụ ndị na-ezumike na-azụkwa ụlọ. A na-eleghara ala ahịhịa na-elekọta nke ala ala ala site na nnukwu ọrụ, nke a na-eleghara anya. Na 1979, a kwụsịrị ụlọ akwụkwọ na Paseky.
Obodo etiti obodo: ụlọ nri na ụlọ ezumike nká Na Buďárce, ụlọ ọrụ nzipu ozi na ụlọ ọrụ obodo. Na nri bụ Ncheta nke ndị Zapadly Patriots na chọọchị mbụ, n'azụ St Wenceslas Church.
Sokol Gospel Unity malitere na Paseky n'afọ 1896. N'ime afọ 1936-1938, e wuru Ụlọ Sokol site n'enyemaka nke eze ukwu nke Sokol, nke ghọrọ obodo omenala ebe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị. A rụrụ ụlọ ihe nkiri ahụ n'ọhịa na Sokol House. Oge mmechi nke ọrụ ahụ bụ nke mbụ na afọ gara aga nke egwú izu ụka na ememme Pasek na 1952, mgbe ọchịchị ọchịchị kọmistụ kwụsịrị ọrụ nke Sokol ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nkịtị nke ndụ obodo ahụ. Ụlọ Sokol gbara afọ 1967 ọkụ, mgbe ndị Czechoslovak na-akwụ ụgwọ ya. Ugbu a (2008), TJ Sokol dị n'ógbè nwere ihe karịrị ndị òtù 100 ma na-eme egwuregwu, egwu na njem nleta, na-ahazi ogige okpomọkụ ụmụaka, na-ekere òkè na nhicha ụlọ, wdg.
Kemgbe 1888 dị na Paseky, e nwekwala mgbapụ ọkụ ọkụ. N'oge gara aga, ndị na-ere ọkụ na-ere ọkụ na-akwado bọọlụ ma na-egwu ihe nkiri amateur na U Soukupu Pub, mgbe e mesịrị na Houslairs Inn. Na 1931, egbe ọkụ na-eme ka otu òtù egwú dị iche iche si Havirna.
Tụkwasị na nke ahụ, site na afọ 2010, òtù nzuzo nke Paseky n'èzí na-arụ ọrụ n'ime obodo, nke na-ahazi ihe omume na omenala obodo.
Site na 1976 gaa na 1990, Paseka abụghị obodo dị iche ma akụkụ nke ya Rokytnice. Na 1991, Paseky bịanyere aka n'akwụkwọ maka Ntuba Akaụntụ Rural na n'okpuru usoro a, Atụmatụ Mpaghara nke Ngalaba Nhazi Paseky nad Jizerou.
N'ime ime obodo, e nwere osisi nkuzi FUKNER sro, onye na-emepụta kaadiboodu na kaadiboodu EMBA sro na ubi ugbo Zvonice.
4Karchivingarchivboxdji mavicdronedroneEMBAEMBA spol. s roeji ire ụtọ kaadibooduJizerkyGiant MountainsugwukvadroptérafunicularkaadibooduLysa Horaskimavicna-adọba ụgbọalaebe a na-adọba ụgbọalaclearingsPaseky nad Jizerouphantomphantom 3phantom 4PolandnragideRokytniceskai resotuskipasuloVilemovkpuommepụta nke kaadiboodusi n'elu
Elekere 10 gara aga
Elekere 13 gara aga
Kọfị kọfị Pịkọl Mpeepe Akara Eserese Onyinye Eserese Eserese Ahụ Gif animim Animated Scribble Free Download
Skateboard Girl Nwa pensịl eserese Pensụl na-adọta ihe onyonyo eserese Gif animim Animated Scribble Free Download
Motocross Pencil sere eserese eserese eserese eserese ihe osise
Ndị mmadụ pensịl eserese pensụl na-adọkpụ eserese eserese Gif animim Animated Scribble Free Download
Nwanyi Nwanyi Nwanyi Esereke Pensụl Na-adọta Atụrụ Foto Gif animim Animated Scribble Free Download
Nwanyi Nwanyi Esereke Pensụl Iri Eserese Eserese Ahụ Gif animim Animated Scribble Free Download